Manni Maree Naannoo Kibbaa walga’iisaa gaggeessaa tureen murteewwan addaddaa dabarse – Fana Broadcasting Corporate
Manni Maree Naannoo Kibbaa walga’iisaa gaggeessaa tureen murteewwan addaddaa dabarse
Finfinnee, Onkololeessa 7, 2012 (FBC) – Qaamolee raawwachiistuu naannoo Kibbaarratti fooyyessa taasifameen kaan yoo diigaman, kaanirratti ammoo jijjiirraan moggaasaa fi qabiyyee taasifameera.
Manni Maree Naannoo Kibbaa walga’iisaa gaggeessaa tureen murteewwan addaddaa dabarseera.
Manni marichaa yaa’ii idilee 8ffaa, marsaa 5ffaa waggaa 4ffaa kanaan dura gaggeessen labsii hojii fi ga’ee qaama raawwachiistuu murteessuuf ba’e 178/2011 raggaasisuun isaa ni yaadatama.
Labsichi fayyadamtummaa fi hirmaannaa diinagdee, hawaasummaa fi siyaasaa ummata naannichaa mirkaneessuuf kan ba’e ture.
Labsichi waan hedduuf furmaata laatus, carraa hojii uumuu fi wabii nyaataa mirkaneessuu, dhimmoota horsiisee bulaa, koominikeeshinii mootummaa, saayinsii fi teeknooloojii, infoormeeshin koominikeeshinii fi qunnamtii, eegumsa naannoo, jijjiirrama qabeenya qilleensaarratti qaawwi muul’ateera jedhameera.
Haaluma kanaan manni marichaa kaan akka diigaman, kaan ammoo moggaasaa fi qabiyyee akka geeddaratan, sirreeffama moggaasaa fi makamanii bifa haaradhaan akka gurmaa’an murteessuun sagalee guutudhaan raggaasiseera.
Waajjiraaleen raawwachiistuu naannichaa 19 turan 22 akka ta’an murteessera.
Proojeektiin tajaajila keessummeessa imaltootaa Buufata Xiyyaara Idila Addunyaa…
Yuunvarsiitiwwaan gara tasgabbiitti kan hingalle yoo ta’e mootummaan ejjeennoo hanga…
Dooktar Akliiluu H/Mikaa’el Ambaasaaddara Oomaanii waliin mari’ataan
Aadde Hiruut ejjennoo Ityoophiyaan hidha haaroomsaa irratti qabdu Ambaasaaddara…
Saawwan Lolaan fudhamanii turan Kiiloo Meetira 8 fagaachuun…
Dooktar Abiy hoggantoota paartilee morkattoota naannoo…
Afrikaan Kibbaa sodaa nageenyaaf jecha balaliinsa xiyyaaraa…
Mariin abbootii qabeenya Oromoo fi Amaaraa finfinneetti…